Weeraro xalay ka dhacay Kismaayo & Xaalado Amaan xumo oo ka jira magaaladaas – SBC
Weeraro xalay ka dhacay Kismaayo & Xaalado Amaan xumo oo ka jira magaaladaas
Tan iyo intii ay magaalada Kismaayo galeen ciidamada wada socda ee Kenyatiga iyo Soomaalida isugu jira waxaa soo kordhayay dhacdooyinka cabsi gelinkara shacabweynaha ku dhaqan magaaladaasi, hadii ay noqdaan falal kala duwan oo xun xun islamarkaana ay geysanayaan kooxo ku labisan dresska ciidamada inkastoo wararku sheegayaan in ciidamada dowlada ay ka dambeeyaan, dilalka qorsheysan iyo weliba weeraradaka imanaya xarakada Alshabaab oo lagu qaadayo fariisimada ciidamada ay magaalada kaga degenyihiin.
Habeenimadii xalay mar qura magaalada waxaa siweyn looga dareemay Daryanka qaraxyo iyo Rasaasta noocyadeeda kala duwan taasi oo ka dhaceysay fariisin ciidamada dowlada ay ka degen yihiin magaalada.
Mudo daqiiqado ah ayay dhacaysa rasaasta iyadoo ay ka dambeysay markii xoogaga xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ay weerar ku qaadeen xarunta maamulka Gobolka ee magaalada.
“dhawaqa bambaano ayaa markii hore dhacay, ka dib waxaa dhacday rasaas xoogleh oo la isku jawaabayay, anaga waan hurudnay wax ka dhashayna ma ogin” ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka oo SBC la hadlay.
Marka laga yimaado rasaasta argagaxa gelisay dadka ee ka dhacday maagalada kismaayo hadana waxaa iyana bar bar socda howlgalo waaweyn oo ay ciidamada Amisom iyo kuwa soomaalida ah ka sameynayaan magaalada iyagoo ku qabqabta qofkii ay ka shakiyaan ka dibna ula dhaqaaqa fariisimadooda.
Sikastaba ha ahaatee ma jiraan warar faah faahsan oo xaqiijin kara khasaarihii ka dhashay weeraradii xalay ka dhacay magaalada Kismaayo,
Dhinaca kale magaalada Kismaayo waxaa maanta gaaray Wafuud ka socota hay’adaha deeqaha bixiya ee qaramada midoobay waxaana halkaasi ay ku mareen kormeer goobo ku yaala magaalada sida isbitalka magaalada iyo goobo ay joogana dad danyar ah.